abasebenzisi Ikhaya le-Inthanethi kuvame bebhekene nenkinga yokusabalalisa traffic Inthanethi kumadivaysi amaningi. Indlela ejwayeleke kakhulu ukwenza lokhu - zisebenzisa router. Uma lokhu akwanele ukuze iyithenge. Ukusetha i-router nakho kubalulekile ukuze uqaphele izinhlelo zethu. Cabanga isixazululo sale nkinga isibonelo kudivayisi TRENDNET okufaneleyo kakhulu ukusebenza futhi kungekho mithetho elandelwayo.
Thatha router yethu. Ukubeka ngokuvamile iqala kudiski ukufakwa ukusebenzisa izikhwebu. Ngokuvamile, kuyasiza ukuxazulula le nkinga. Ngakho, xhuma umhlinzeki ikhebula adaptha inethiwekhi, computer bese wenza kusebenze i-WiFi. Ngesikhathi esifanayo besikhumbula nokuvikeleka. Khona-ke, ufaka disc ku idrayivu bese uchofoza wavula ipuleti eliqoshwe umbhalo othi "Ukufaka-router." Siya ukuhlela ikhadi inethiwekhi futhi TCP \_ IP olandelwayo uhlanganisa ukuthola IP amakheli ngokuzenzakalelayo.
Ngezinye izikhathi kuvela isethaphu router silula. Kufanele enze konke okungenhla, futhi kukhona awokuthi kakhulu ukuthi uzozuza inthanethi. Qalisa isiphequluli uma ikhasi kungaqali evulekile, yenza okulandelayo: SETHA KABUSHA umkhiqizo kumadivayisi ngokuchofoza inkinobho efanelekile. Iqalise futhi ukumhlinza efanayo. Kwakubonakala Network!
Uma uxhumano senziwa usebenzisa intambo ikhebula patch, kusenzima kulula. Xhuma uma usebenzisa ikhompyutha siqu futhi router uyothela PC ekhoneni elingezansi kwesokudla inkinobho ekhethekile, ngokucindezela okuyinto uzokwazi ngokushesha ufaka zonke nemingcele eshiwo ngenhla.
Kodwa ukuphila kwenzeka ezahlukene. Kwenzeka futhi ukuthi ukufakwa disk engasebenziseki noma ezilimele. Futhi ukubeka router ngale ndlela kuyinto engenakwenzeka. Yini okufanele siyenze?
Inqubo ukulungisa ukusatshalaliswa Inthanethi luyindida, kodwa kukhona isixazululo. Ukuze uqale ukwenza wonke efanayo endabeni odlule. Khona-ke kudingeka uthole izilungiselelo router. Vula isiphequluli sakho ozithandayo ngokuthayipha ku yekheli: 192.168.1.1. Njengoba igama lomsebenzisi nephasiwedi ukubhala igama elithi admin.
Khona-ke ngesandla sinquma yonke idatha ezidingekayo. Naphezu kweqiniso lokuthi umzila - kwayona ngempela -anti-virus ezinhle, nibeka siqu amaphasiwedi IPHASIWEDI kwesigaba yabo. Manje udinga ukubhalisa WAN: uhlobo uxhumano - PPPoE, igama service - Lanport, igama lomsebenzisi - ucacise inombolo inkontileka, iphasiwedi - baziqambela iphasiwedi entsha, phinda iphasiwedi, kabusha okuzenzakalelayo - I-.
Manje thina watch esigabeni STATUS. Ngemva kwesikhathi esithile lapho kumele akhombise ukuthi i-IP amakheli wonke amadivayisi etholwe. Ukubeka TRENDNET router kuqedile, ihlala yodwa ukuze uqinisekise ukuthi i-Internet yazuza. Ngezinye izikhathi lokho kungasebenzi okokuqala. Asazi UKUSETHA KABUSHA futhi ngalesosikhathi phinde it.
Uma ufuna ukuxhumana kwenethiwekhi kwaba ungaphazanyiswa oqine, landela enye inqubo - ukufinyelela ukugunyazwa-Wi-Fi. Ukuze wenze lokhu, e okufanayo ukulungisa router evulekile iphrofayela Wireless-Basic bese usetha SSID - ubude hhayi ngaphansi kwezinhlamvu ezingu-10. Manje ukuxhuma iyiphi idivayisi kunethiwekhi kusuka kumzila Ngamunye kubo uzodinga ukuthi uphinde le nqubo uma uthanda.
Yilokho. Sonke esiphethweni, ukuthi ukucushwa router futhi siqiniseke ukuthi asivumeli lutho nzima ngalo. Amandla ngisho umsebenzisi isilinganiso.
Njengoba Android ixhunywe ukusebenzisa icomputer? Amathiphu namacebo